Beautify keung wa: အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝ
စကားပြောကောင်းတယ်? ထက်မြက်တယ်? ရဲရင့်တယ် သတ္တိရှိတယ်? ဒါဟာ ဟီလာရီကလင်တန်ကို လူတွေကပေးတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေဖြစ်မယ်။ လူတွေက သူ့ကိုပဲဘယ်လိုပဲဆိုဆို သူဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ ထိပ်တန်းရောက် အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ဟီလာရီဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကလင်တန်ရဲ့ အရည်အချင်းလောက် မနိမ့်ကျရုံမက သူဟာငယ်ငယ်လေးကတည်းက ထက်မြက်သူ၊ ထူးချွန်သူ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုရှိသူ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဟီလာရီကို အမေရိကန်ချီကာဂိုမြို့ လူလတ်တန်းစားမိသားစုက မွေးဖွားခဲ့တယ်။ (၄)နှစ်သမီးအရွယ်မှာ ဟီလာရီကို ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားနဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိစေဖို့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုက လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက သူတို့နေတဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဟီလာရီကို အမြဲအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ အမြဲအနိုင်ကျင့်ခံရလို့ အဲဒီကောင်မလေးကို ဟီလာရီအရမ်းကြောက်ခဲ့တယ်။ အနိုင်ကျင့်ခံရတိုင်း မိခင်ကိုငိုယိုပြီး သူတိုင်တယ်။ မိခင်က အနိုင်ကျင့်ခံရရင် မကြောက်မရွံ့နဲ့ ပြန်တုန့်ပြန်ရတယ်လို့ ဟီလာရီကို ပြောပြတယ်။ မိခင်စကားအတိုင်း အနိုင်ကျင့်ခံရတိုင်း ဟီလာရီမငိုခဲ့တော့ဘူး။ မကြောက်မရွံ့နဲ့ မားမားရပ်ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ဟီလာရီရဲ့ ဦးဆောင်မှုပါရမီက တစ်နေ့တခြား ပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သူ့ဘေးမှာ ကလေးတွေအများကြီး စုရုံးဝိုင်းရံတာကို ခံခဲ့ရတယ်။
ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ လူဘယ်နှယောက်ရဲ့အာရုံကို ဒေးဗစ်ဘက်ခ်ဟမ်း ဖမ်းစားဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲ? စာရင်းပြုစုနိုင်ခဲ့ဖူးပါသလား?
ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ဒီကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား ကိုယ်ထင်ပြပြီဆိုတာနဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ညာသံ၊ အော်ဟစ်သံတွေက ကွင်းတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းသွားစေသလို ကင်မရာမီးရောင်ကလည်း တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ ရပ်နားခဲ့တယ်လို့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘက်ခ်ဟမ်းဟာ (၃)နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဘောလုံးစကန်ခဲ့ပါတယ်။ ဘောလုံး"ကန်"တယ်ဆိုတာထက် ဘောလုံး"ကစား"တဲ့အချိန်က ပိုများခဲ့ပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့ကိုတစိုက်မတ်မတ် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ အဆော့သန်တဲ့ဘက်ခ်ဟမ်းဟာ ဘောလုံးကိုတဖြေးဖြေး နှစ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ ဘက်ခ်ဟမ်းနဲ့ဖခင် "အလောင်းအစား"တစ်ခု လုပ်ခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေ ဘက်ခ်ဟမ်း ဂိုးတစ်ခါသွင်းနိုင်တိုင်း ဖခင်က သူ့ကို ငွေအကြွေ ၅ဝပဲနိပေးတယ်။ ဂိုးဝင်တိုင်း မုန့်ဖိုးရတဲ့ ဘက်ခ်ဟမ်းက ကလေးပီပီ ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ တဖြေးဖြေး ကြီးပြင်းလာမှ ဖခင်ရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုနဲ့ စေတနာကို သူနားလည်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ဒဲလားက တောင်အာဖရိကတိုက်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော လူမည်းသမ္မတဖြစ်တယ်။ တောင်အာဖရိကရဲ့ လူမျိုးခွဲခြားရေး၊ အသားအရောင်ခွဲခြားရေး ပပျောက်အောင် (၁ဝ)နှစ်ကျော်ကြာ သူ မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းခဲ့လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ အားပေးမှုကိုရခဲ့တယ်။ မန်ဒဲလားဟာ ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့သင်္ကေတလို့ လူတွေကဆိုကြတယ်။ မန်ဒဲလားရဲ့ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်၊ လိုအင်ပြင်းပြတဲ့ တရားမျှတမှုနဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေက ငယ်စဉ်ကတည်းက သူ့အသွေးသားထဲ စီးဆင်းနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။
ရွာလေးတစ်ရွာမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ မန်ဒဲလားဟာ သူ(၉)နှစ်အရွယ်မှာ ဖခင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ရပ်ရွာအငြင်းပွားမှုတွေကို ရွာသူကြီးက ဖြေရှင်းတိုင်း လူဖြူအစိုးရရဲ့ဥပဒေနဲ့ ကန့်သတ်ချုပ်ချုယ်ခံရတာကို သူအမြဲတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက် တရားမျှတမှုနဲ့ တန်းတူတဲ့အခွင့်အရေး၊ တန်းတူတဲ့အတွေးအမြင်ကို ရှာဖွေရမယ်လို့ သူသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ အသက်တဖြေးဖြေး ကြီးပြင်းလာပြီးနောက် သူ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ ကျောင်းထဲက လူဖြူဥပဒေကို သူဆန့်ကျန်ပုန်ကန်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့လို့ သူကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ ပုန်ကန်ထကြွမှုတိုင်းမှာ မန်ဒဲလား ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်က တောင်အာဖိရိက,က လူမည်းတစ်ဦးတိုင်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်။
ဂီတလောကမှာ မိုးဇက်(Mozart)ကို ထူးခြားတဲ့ ကလေးပါရမီရှင်လို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိုးဇက်ရဲ့ ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပါရမီ၊ ထူးချွန်မှုဟာ ပေါ်လွှင်နေပြီဖြစ်တယ်။ ဂီတအနုပညာအပေါ် ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒ၊ စွဲလမ်းနှစ်သက်တဲ့ စိတ်သဘောထားကို မိုးဇက်ရဲ့ကလေးဘဝမှာ သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ပါရမီရှင်မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးတချို့အတွက် ကလေးပါရမီရှင် မိုးဇက်ဟာ အတုယူစရာ၊ အားကျသင်ယူဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မိုးဇက်ဟာ ကလေးဘဝတည်းက စန္ဒရားရှေ့အမြဲသွားပြီး စန္ဒရားခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး စိတ်ဝင်တစား နားထောင်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ သူတစ်ကြိမ်ပဲ နားထောင်ဖူးတဲ့ တေးသွားအတိုင်း လိုက်တီးတတ်တယ်။ တစ်ခါတုန်းက ဖခင်က မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ (၄)နှစ်အရွယ် မိုးဇက်တစ်ယောက် စားပွဲခုံပေါ်ထိုင်ပြီး တစ်ခုခုရေးနေတာတွေ့တော့ ဖခင်က ဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတယ်။ မိုးဇက်က စန္ဒရားသံစဉ်တွေကို ရေးနေတယ်လို့ဆိုတယ်။ သူရေးနေတဲ့ စာရွက်ကိုယူကြည့်တော့ ဖခင်ဟာ အံ့သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ မိတ်ဆွေကို ယူပြပြီး ဖခင်ကပြောတယ်.. "ကြည့်စမ်း! သူရေးထားတာတွေက ညီညာမှန်ကန်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိလိုက်တာ"။ အဲဒီနောက်ပိုင်း မွေးရာပါ ပါရမီကို ကြိုးစားမှု၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုတွေ သူထည့်ပေါင်းခဲ့တယ်။
HP (Hewlett-Packard Company)ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး အမျိုးသမီးအရာရှိဟောင်း Carly Fiorinaဟာ အမျိုးသားဦးဆောင်သူတွေကြားမှာ လှပထင်ရှား ကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်။ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိပြီး၊ ဇွဲသတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ Carlyကို အမေရိကန် Fortuneမဂ္ဂဇင်းက "သြဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်" အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံခဲ့ရတယ်။ Carlyဟာ ကလေးဘဝကတည်းက မိခင်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှု၊ သင်ယူမှုနဲ့ ဘဝကိုချစ်တတ်မှုတွေ သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။
Carlyကို အမေရိကန် တက်ဆက်ပြည်နယ်က ဥရောပသွေးပါတဲ့မိသားစုက မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဖခင်က ဗဟိုအစိုးရဌာနက တရားသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိခင်က အနုပညာသည်တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ကလေးဘဝတည်းက မိခင်ဟာ သူ့ရဲ့အလေးစားဆုံးသူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘဝကိုချစ်၊ သဘာဝကိုချစ်တဲ့မိခင်ဟာ Carlyကို လူလုပ်တဲ့သဘောတရားတွေ သင်ပေးခဲ့တယ်။ Carlyရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသစေခဲ့တယ်။ Carlyဟာ ငယ်ငယ်လေးတည်းက ဖခင်နဲ့အတူ နိုင်ငံပေါင်းစုံလည်ပတ်ခဲ့ဖူးလို့ မျက်စိပွင့်နားပွင့်ရှိခဲ့သလို ကိစ္စရပ်တစ်ခု၊ ပြဿနာတစ်ခုရဲ့ အတိမ်အနက်ကို တွေးတောဆင်ခြင်တတ်စိတ်တွေ မွေးမြူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာလည်း သူ့ကို ရဲရင့်သူ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသူ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိသူနဲ့ ဘဝကို ချစ်ခင်တတ်သူအဖြစ် သက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:55 PM
The Maha Bodhi Society of India
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် (၁၀၀) စာရင်း ထ...
အမေ့အသက် (၂၅)၊ သားအသက်(၂)နှစ်